Naqshadaynta Naqshadaynta Sida Spam Filters Work
Artem Abgarian, oo ah Semt Guusha Macaamiisha Sare
Maamulaha, ayaa sheegay in faylaha spam ay jahawareer ku noqon karaan suuqyada xitaa haddii ay haystaan ​​ogolaansho iyo dukumiinti aan la saxiixan oo ay saxiixeen isticmaalayaasha ugu dambeysa. Ku tababar marka fariimaha emailka ah ee lagu calaamadeeyay sida spam waxaa lagu magacaabaa "been abuur ah." Xaaladaha intooda badan, xaaladahan ayaa dhacaya marka dadka qaata aysan isticmaalin adeegga waaweyn ee ISP sida Yahoo, Google, Hotmail, iyo AOL.
ISP-yada waaweyn ayaa ku habeeyay fiilooyinkooda spamka ee khibrada isticmaalaha halka ganacsiyada yaryar ay isticmaalaan shaashadaha ganacsiga ee spam. Muuqaalada spam ee ganacsiga waxay ka shaqeeyaan saddex heer oo difaac ah: shaandhaynta emails ka hor inta aysan gaarin server, shaashada emails ka dib markii ay gaareen server iyo ugu dambeyntii xayirey waraaqaha macaamiisha isticmaala.
Fayleyaashani waxay ku dhajiyaan nuqulka boostada si ay u ogaadaan spam. Ka dib markaad fariin u hesho shaandhada, waxaa lagu qiimeeyaa shuruudahan: erayada iyo odhaahyada, cabbirka muuqaalka, isku xirnaanta, iwm. Marka la eego, waxay u muuqataa in suuqyadu u baahan yihiin inay yaqaanaan ereyada iyo odhaahyada kiciya spam filter oo isku dayaan inay ka fogaadaan . Qaar badan oo soo-saarayaasha emailka fariinada ma wadaagaan macluumaadkaan, filtarradooduna waxay is-beddelayaan si ay uga jawaabaan isbedelada spam ee hadda jira. Si kastaba ha noqotee, bixiyeyaasha sida Spam Assassin waxay muujinayaan waxoogaa macluumaad ah oo waxtar leh oo ku soo geli kara haddii aanad doonaynin in fariimahaaga lagu daro sida spam. Faylka elektaroonigga ah ayaa la hagaajiyaa wakhti kasta si loo hubiyo in spam uusan helin sanduuqa.
Ganacsiyada qaarkood waxay isticmaalaan santuuqyo diirada saaraya madaxyada iyo sumcadda diraha. Waxay bartaan inta qof ee qaata oo calaamadda boostada ku calaamadeeya sida spam. Fiiriyeyaasha kale waxay isku dayaan inay ogaadaan haddii emails loo diro shaqaaluhu waa shaqo la xidhiidha ama aan..Fariin ah in lagu guuldareysto baaritaanka waxaa loo diraa junk.
Filtarrada qaarkood waxay ku tiirsan yihiin keliya isticmaalaha ugu dambeeyay. Haddii macaamiishu ay aqbalaan boostadaada sanduuqa kuugu jirta, waxaad u diri kartaa boostada adiga oo aan walwal gelin filashooyinka spam. Xaaladahan oo kale, helitaanka ruqsadaha isticmaaleyaasha dhammaadka waxay ka hortagtaa sifooyinka spam ee u diraya boostadaaga si aad u hesho faylka spam.
Talooyin ku saabsan sida looga fogaado in loo calaamadeeyo spam:
Ka fogow emails dhamaan muuqaalada
. Taas iska soo horjeeda, xaqiiqda, filimka spam waxay u arkaan farriimaha sida kuwa shakiga leh. Sidaa darteed, had iyo jeer fiiri sawirradaada iskudarka qoraalka, sababtoo ah qoraalka aan habooneyn ayaa u diri kara emailkaaga si uu u noqdo spam.
Ka fogow calaamadaha ereyada spammy, iyo ereyada
Ereyada sida jinsiga, lacag la'aan, bixinta, hadda wac, Viagra iyo 'hadda iibsashada' firfircoonaanta sifooyinka si dhaqso ah u dhaqaajiya.
Isticmaal xarfaha waaweyn
Waraaqo waaweyn oo ku saabsan khadka mawduuca waxay kicin kartaa shaandhada si ay u soocaan boostadaada sida spam. Sidoo kale, ku dheji mawduuca mawduuca oo kooban oo toos ah.
Ka fogow lifaaqyada
Lifaaqyada badanaa waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin aan macquul ahayn, sidaas darteed boosta ku lifaaqan waxay leedahay fursado badan oo loo calaamadeeyn karo spam filter by. Tani sidoo kale waa sababtoo ah filtarrada qaarkood ma eegi karaan lifaaqyada faylasha xaasidnimo.
Ugu dambeyntii, iska ilaali diritaanka xiriiriyaasha akhristayaasha bogga oo aan waxba laga reebin sawirada. Isku day in ay xiriir la yeeshaan bogag sharci ah oo leh qoraalo. Si aad isaga ilaaliso dhibaatooyinka, xasuuso inaad dirto boostada oo keliya kuwa ku qoran liiskaaga Source .